အိမ် | Gamelanders.com
မိတ်ဖက် & သူငယ်ချင်းများ
ဂိမ်းမိသားစု၏ Gamelanders မှကြိုဆိုပါသည်။
နောက်လိုက်အသစ်၊ ကြေညာသူ၊ သူငယ်ချင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါစေ
6 ။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 2021	အထူးပြောစရာမရှိ
1 -4ကစားသမား 30 မိနစ်၊ အသက် 10+ စာရေးသူ- Rôla & Costa သရုပ်ဖော်သူ- Marina Costa ထုတ်ဝေသူ- HUCH! Sylex ဂိမ်းပစ္စည်း-  4.6/5 ပျော်စရာအချက်-  4.8/5
22 ။ နိုဝင်ဘာလ 2021	1 မှတ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် bits၊ bytes နှင့် cardboard တို့မှ ဂိမ်းများကို ဖန်တီးပါသည်။ သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ ကစားသည့်အခါတိုင်း သင့်စားပွဲများ၊ ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့် ကွန်ပျူတာများသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကို ယူဆောင်လာပါ။
22 ။ နိုဝင်ဘာလ 2021	အထူးပြောစရာမရှိ
2 - ကစားသမား4ဦးခန့် အသက် 25 နှစ်မှ 10 မိနစ် စာရေးသူ: Sebastian Marwecki Illustrator: Miguel Fernandez Publisher: Bombasta Games ပျော်စရာအချက်-  5/5 ပြန်ဖွင့်တန်ဖိုး-  4.8
31 ။ အောက်တိုဘာလ 2021	အထူးပြောစရာမရှိ
3 -6ကစားသမား 40 ခန့် + 12 ယောက်မှ + စာရေးသူ- Bruce Glassco Rob Daviau Illustrator- Dennis Crabapple McClain Christopher Moeller Peter Whitley ထုတ်ဝေသူ- Asmodee
Cthulhu Death သည် သေနိုင်သည်။
29 ။ အောက်တိုဘာလ 2021	အထူးပြောစရာမရှိ
1 -5ကစားသမား 90+ မှ မိနစ် 12 ခန့်ကြာ ရေးသားသူ- Rob Daviau Eric M. Lang Illustrator- Adrian Smith Karl Kopinski Nicolas FructusRichard WrightFilipe Pagliuso ထုတ်ဝေသူ- CMON
28 ။ အောက်တိုဘာလ 2021	အထူးပြောစရာမရှိ
3 -5ကစားသမား 60+ မှ မိနစ် 12 ခန့် စာရေးဆရာ- Rob Daviau Illustrator: Miguel Coimbra Publisher: HUCH! IELLO ဂိမ်းပစ္စည်း-  4.5/5 ပျော်ရွှင်စရာအချက်-  4.7/5
Sabrina & Hanno ကတ်၊ အန်စာတုံး (သို့) ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်အပတ်တိုင်းပြန်ပေးဆွဲခြင်း။
Rita Modl နှင့် Alexander Koppin တို့ဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ Podcast တခုထဲမှာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်။ သူတို့ကအချို့သောပုံစံအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းကြောင်းတိုတောင်းသောဂိမ်းများကိုကစား။ စပ်စုပါ
2-4 ကစားသမား 24 12 နှစ်ကနေ 14 App ကိုအခြေခံထားတဲ့ဂိမ်း 8 ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း 33 ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ 26 extension ကို 15 မိသားစုဂိမ်း 30 မိသားစုဂိမ်းများ 16 Ouch! 18 Kartenspiel 8 ကဒ်ဂိမ်းများ 16 အရုပ်အသေးစား 14
ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitch ချန်နယ်
Gamers Gear ပါ
အားဖြင့်တင်ပြ WordPress ကို။ Foodica WordPress မှအခင်းအကျင်း WPZOOM ။